नेपाल खरानी दलको घोषणा पत्र - Fitkauli
नेपाल खरानी दलको घोषणा पत्र
निर्वाचनको अचार-तरकारीको संहिता लाइसकेको हुनाले यही नेपाल खरानी दललाई भोट दिनोस् भन्नलाई मेरो अधिकारभित्र पर्दैन ।
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा खरानी दल भन्नाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र नभएका सबै किसिमका दलहरूलाई जनाउँछ । मनले चिनेका दलहरू, धनले किनेका दलहरू, जेठी बुढीका सालातिरका दल, ठाइली बुढीका सालीतिरका दल, भू.पू. बी.एफ.को देवरतिरको दल हुँदै बाबु, बाजे, बराजु सबैतिरका दलहरूलाई यसमा समेटिएका छन् ।
हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन कुन्नि ? यस दलभित्र पञ्चै बाजा बजाएर बिहे गरेका दल, खुसुक्क पोइल गएका दल, पटक-पटक पारापाचुके र पुनर्मिलन गरिरहने दल, सिङ्गल दल, जोडी दल, कसैले थाहा नपाउने गरी सर्वसम्मत चिनेका दल, उच्चकोटिको, गुणस्तरीय र विकासे मानेर विदेशीसँग किनेका दल र अन्य आउरे, बाउरे, चाउरे सबै दलहरू भनेका नै नेपाल खरानी दल भएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।
यस दलभित्र आजभोलिका आधुनिक दलहरू लञ्च दल, डिनर दल, स्नाक्स दल, वेभरेज दल मात्र होइन हजुर प्राचिन समयदेखि नै उच्चकोटिमा रहेका दलहरू नेपाल जाँड दल, भट्टी दल, चिउरे दल, कुखुराको मासु र भात दल, खसीको झोल र चिउरा दल सबैले मेरो दल छुट्यो भनेर भन्न पाउनु हुने छैन । छुटेसी छुट्यो-छुट्यो अरु दलमा जस्तो मलाई फल्नो दलको फल्नो पद दिएदेखि तिम्रो दलमा आउँछु समेत भन्न पाउनुहुने छैन ।
चुनावको बेलामा यहाँहरूलाई नेपाल खरानी दलको कुराहरू कस्तो लाइराछ कुन्नि ? आफूलाई भने सधैँको चटारो, आजै बिहान त हो नि प्रेसर कुक्करको भाले नबास्दै मेरी जेठी जोई बासेकी थिइन् । मेरा राजा हाम्रो खरानी दलको घोषणा पत्र तयार भो त ? चुनाव त आइसक्यो नि । म त झल्याँस्स भएँ । सधैँ आफ्नै पैसोले लोक्कल ठर्राको क्वाटर प्याक लगाएर सुत्ने आधुनिक मनुष्य म हिजो राती चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा गैहालेँ । मेरा हितैषी उम्मेदवार साथीहरूले फ्रिमा आधुनिक विदेशी ठर्रा चखाइहाले नि । फ्रिमा पाको भनेर चार/पाँच प्याक लाइहाले । अहिलेसम्म जँड्याहालाई हुने जस्तै ह्याङ्ओभर भैराछ गाँठे । जति धेरै धोके पनि ठ्याक्कै लोक्कल ठर्रा र तीनपानेकै विशेषता बोकेपछि-त्यसलाई पनि ठर्रा पार्टी, तीनपाने पार्टी नभनेर के को वेभरेज पार्टी भनेका हुन् कुन्नि ? अहिलेसम्म पनि यही कुरो मनमा लाको लाई छ बाई ।
अँ साँच्ची कुरो जेठीले राम्रै गरेकी हुन् । अब चुनावको बेलामा नलेखेको घोषणा पत्र कहिले लेख्नू ? म लेख्न शुरु गर्ने अनुमति माग्दछु । मेरा ज्ञाननीय, माननीय, शाननीय, बाँडनीय, हाननीय आदि सबै-सबै-सबैले मेरो पार्टीलाई, हामी र हाम्रो पार्टीलाई मत दान गर्नुहोला ।
१. नेपालको मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट दल नेपाल खरानी दल । आम नेपालीलाई मात्र नभई विश्वका सबै अराष्ट्रिय तत्वहरूलाई समेत राष्ट्रिय तत्वमा समावेश गर्ने दल भनेको तपाईँ-हामी सबैको दल नेपाल खरानी दल । २. महिला र पुरुषलाई मात्र बराबरी नभई सबै दललाई बराबर पार्न सक्ने एक मात्र दल नेपाल खरानी दल । ३.उम्मेदवार बन्नको लागि फौजदारी अभियोगमा कम्तिमा पनि दुई पटकभन्दा बढी जेल सजाय पाएको इमान्दारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने एक मात्र दल नेपाल खरानी दल । ४.अरु दलले जस्तो हाम्रो दलले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड, नेपाललाई सिँगापुर बनाउँछु भनेर हाम्रो दलले भन्दैन । हाम्रो दलले त दुई/चार पटक राज्यको ढिकुटीमा स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर जान पाएको खण्डमा स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुरलाई नै नेपाल बनाउन सक्ने उच्चकोटिको क्षमता भएको दल नेपाल खरानी दल ।
५.खरानीको जस्तै विशेषता भएको दल, हावा नआउँदा शान्त जस्ताको तस्तै भैरहने, हावा आएपछि नाम निशाना नै नरहने गरी उड्न सक्ने महान् दल नेपाल खरानी दल । ६.एकै रातमा नेपालको विकास गरी सगरमाथाकै चुचुरोसम्म पुर्‍याउने दल नेपाल खरानी दल । ७.मानव बेचबिखन,लागु पदार्थ ओसारपसार, कालाबजारी, सिन्डीकेट, दण्डहीनताको विकास प्रचुर मात्रामा गरी मुलुकको समृद्धिको सपना बोक्ने एक मात्र उच्चकोटिको दल नेपाल खरानी दल । ८.सक्नेले सके जति लुट्न पाउने, चोर्न पाउने, सोहर्न पाउने, भर्न पाउने, लर्न पाउने, छर्न पाउने आधुनिक विशेषता बोकेको दल नेपाल खरानी दल । ९.देश बेचेको पैसो मात्र विदेशी बैंकमा नभएर देशलाई नै विदेशी बैंकमा जम्मा गर्न सक्ने नैतिकताले भरिपूणर् भएको एक मात्र दल नेपाल खरानी दल ।
१०.सबै प्रकारका लागु पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरणबाट हरित क्रान्तिमा छलाङ् मार्न सक्ने दल नेपाल खरानी दल । ११.कर्मचारीले मात्र नभएर सर्मचारी लगायत अन्य सबैले मन लागेको, पाएको र भेटेको जति सबैलाई बिहे गर्दा पनि बहुविवाहको उजुरबाजुर लगाउन नपाउने दल नेपाल खरानी दल । १२.पुरुषहरूले जस्तै महिलाहरूलाई पनि तास खेल्न, अल्कोहल पिउन र धुम्रपान गर्न प्रतिस्पर्धा नै गराउने दल नेपाल खरानी दल । १३.गरिबलाई कङ्गाल र धनीलाई महासेठ बनाउने उत्कृष्ट दल नेपाल खरानी दल ।
१४.शिक्षा र स्वास्थ्यमा चर्को शुल्क असुलेर फ्रिमा चोर्न, ठ्ग्न, लुट्न पाउने दल नेपाल खरानी दल । १५.उम्मेदवार जति सबैले हारे पनि, जिते पनि घण्टा, मिनेट र सेकेन्डको हिसाब गरेर सरकार चलाउने दल नेपाल खरानी दल । १६. अलि-अलि मात्र हुन थालेको विकासलाई एकै रातमा चिलिम्च्याँट बनाउन सक्ने अलौकिक क्यापासिटी भएको दल नेपाल खरानी दल । १७.पशुपालन नै नगरी घर आगनभरि थुप्रै बधशाला खोल्न सक्ने जादुगर क्षमता भएको दल नेपाल खरानी दल । १८.अलि-अलि भएको उद्योग कलकारखाना पनि सबै बन्द गरेर रोजगारीको प्रशस्त अवसर खोल्न सक्के दल नेपाल खरानी दल । १९.जताततै समृद्धिको भ्यू टावर चढेर नाङ्गा डाँडा र सुकुम्बासी अनि सडक बालबालिका हेरेर रमाउन सक्ने दल नेपाल खरानी दल । २०.नीति, नियम र सिद्धान्तलाई बिर्सिएर सदाचार र नैतिकतालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने महान दल नेपाल खरानी दल ।
अति आदरणीय पाठक महाशय- यहाँ नेपाल खरानी दलको महत्व, विशेषता र फाइदाहरूलाई हजार वटा जिब्रो भएको शेषनागले त वणर्न गर्न सक्दैन भने एउटा मात्र जिब्रो त्यही पनि हाड नभएको मनुवाले के-को फूर्ति लाउनु ? हाम्री जेठीको अनुरोधलाई हार्न नसकेर दारुको ह्याङ्ओभरको ह्याङ् हटाउनलाई यसो दुई/चार वटा सम्झेको मात्र हो । मलाईभन्दा धेरै कुरा त यस दलको बारेमा यहाँहरूलाई नै थाहा छ । निर्वाचनको अचार-तरकारीको संहिता लाइसकेको हुनाले यही नेपाल खरानी दललाई भोट दिनोस् भन्नलाई मेरो अधिकारभित्र पर्दैन । भोटको मूल्य अमूल्य हुन्छ भन्छन् । अमूल्य भोटले सस्तो सामान खरिद नगर्नुहोला ।
उपभोक्ताको हक नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रहेकोले भोट भन्ने वस्तु खरिद गर्दा यसको उत्पादन मिति, उपभोग्य योग्य मिति, गुणस्तरको प्रमाण चिन्ह, अरुको चोरेको नभै आफ्नै ट्रेडमार्क अनि यसबाट आफूले प्राप्त गरिने क्यालोरी कति छ सबै कुराको राम्रोसँग हिसाबकिताब गर्न चनाखो बन्नुहोला ल । हाम्रा कुराहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुन्नि खबर गर्न नबिर्सनुहोला ल ।
News Views: 445
गायत्री परिरोशनी प्रकाशित मिति : वैशाख २६, २०७९
मन पर्‍यो 7
हाँसो लाग्यो 3
नेपाल आउन्नँ म